XOG: Musharaxiinta madaxweyne ee Beesha Mudulood oo shir ka dhan ah DF ku leh Nairobi - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG XOG: Musharaxiinta madaxweyne ee Beesha Mudulood oo shir ka dhan ah DF...
XOG: Musharaxiinta madaxweyne ee Beesha Mudulood oo shir ka dhan ah DF ku leh Nairobi
Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa ka socda shir u dhaxeeyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2020/21,kuwaas oo doonaya iney isbaheysi sameystaan.Advertisement
Musharaxiinta ku kulansan magaalada Nairobi aya waxay yihiin kuwa mucaaradka ku ah Dowladda Federaalka,waxaana laga xusi karaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo ku wada jira Liiska Beesha Mudulood.
Xogta aan shirka ka helnay ayaa sheegaya in Sheikh Shariif iyo Daahir Maxamuud Geelle oo Labadaba ah musharaxiin madaxweyne ay doonayaan iney cududooda mideeyaan si ay tartan adag ula galaan musharaxiinta kale ee la aamisan yahay iney yihiin kuwa ugu saameynta badan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Waxgaradka Beesha Mudulood ay ku cadaadinayaan Daahir Maxamuud Geelle inuu u tanaasulo madaxweyne Sheikh Shariif oo sanadkan xoogga la isugu geynayo si ugu guuleysto doorashada 2020/21.Advertisement
Sidoo kale, warar aan la hubin oo aan helnay ayaa sheegaya in Xasan Sheikh Maxamuud uu qudhiisa u tanaasulayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed.
Doorashada sanadkan oo xamaasad gooni ah leh ayaa la aamisan yahay iney ka adag tahay doorashooyinkii hore ee dalka soo maray.
Previous articleXiisad siyasadeed ka dhax aloosan Fiqi iyo ganacsatada galmudug mxy tahay sababtu?
Next articleMaxaa kasoo baxay kulankii Muqdisho ku yeesheen Wasiirada iyo Xildhibaanada Hawiye ?
SAWIRO:-Ciidamo horleh oo lagu daadiyay wadooyinka Dhuusamareeb
Maxaa ku soo kordhay amniga Dh/mareebCiidan badan oo la dhigay Wadooyinka ?
Booliska gaalkacyo ee galmudug oo saldhig cusub iyo gaari lagu warejiyay (Daawo Sawirada)
Wararkii ugu dambeeyay Dagaal saakay ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Dowlad goboleedyadda galmudug iyo jubaland oo daahfuray Imtixaanka dugsiga dhexe
Maxaa ku soo kordhay amniga Dh/mareebCiidan badan oo la dhigay Wadooyinka...
Booliska gaalkacyo ee galmudug oo saldhig cusub iyo gaari lagu warejiyay...